Ny vondrom-piarahamonina H'MONG misy vondrona foko 54 any Vietnam - Ny tany masina amin'ny fandalinana Vietnam
Tizy H'MONG dia manana mponina mihoatra ny 896,239 mponina monina amin'ny fifantohana any amin'ireo faritra be tendrombohitra any amin'ny faritanin'i Ha Giang1, Tuyen Quang2, Lao Cai3, Yen Bai4, Lai Chau5, Dien Bien6, Zanaka La7, Cao Bang8, Thanh Hoa9 ary Nghe An10. Vao haingana, nifindra tany amin'ny Central Highlands ary ny tapany atsinanan'i South Vietnam. Manana vondrona maromaro ao an-toerana izy ireo: H'mong Trang (White H'mong), H'mong Hoa (Voninkazo H'mong), H'mong Do (Mena H'mong), H'mong Den (Black H'mong), H'mong Xanh (Blue H'mong). Ny anarany hafa dia meo ary Mieu. Ny fiteny H'MONG dia an'ny H'mong-Dao11 group.
Fna tsia, ny H'MONG dia mivelona amin'ny fambolena slash-and-bum. Mamboly vary sy kom. Amin'ny toerana sasany, manafoana ny tanimboly misy torotoro koa izy ireo. Ny voly sakafo foto-tsakafo dia ny com, ny vary ary ny rai. Mamboly zavamaniry rongony izy ireo hamatsy kofehy ho an'ny tenona sy zava-maniry fanafody. Ny omby H'MONG rea, alika, renibe ary akoho. Taloha ny H'MONG dia nieritreritra fa ny fiompiana dia nataon'ny vehivavy ary ny fihazana any anaty ala dia fiampangana an'ny lehilahy. Amin'izao fotoana izao eo ambanin'ny Fanampian'ny fanjakana, ny H'MONG dia nahomby tamin'ny famolavolana tanimbary, ny fambolena ny vokatra indostrialy ary ny fiompiana amidy. Nihatsara tokoa ny fiainan'izy ireo. Ny mpanefy vy sy ny fanenon-dohany dia efa be mpahalala.
Tizy H'MONG dia nanao ny lamban-drazan'izy ireo tamin'ny lamba rongony tena. Ny akanjo nentim-paharazana vehivavy dia misy zipo, blouse misokatra amin'ny vodiny aloha sy avaratra sy leggings. Ny vozon'akanjo voasarona miloko marevaka dia lamba latsaka amin'ny soroka. Ny zoron'izy ireo marolafy dia nozairina sy nohaingoina. Amin'izao fotoana izao, maro ny olona no mividy akanjo vonona akanjo. Finoana ankapobeny eo amin'ny H'MONG fa ny olona mitovy firazanana dia afaka miteraka sy maty ao an-tranon'ny tsirairay, ary tokony hifanampy sy hifanampy. Ny tsipika tsirairay dia mivondrona ao anaty vondron'olona iray, ny lohany no mandray raharaha iraisana.
Young H'MONG lehilahy sy vehivavy afaka misafidy ny mpiara-miasa aminy. Voarara tanteraka ny fanambadiana eo amin'ny samy lahy sy vavy. Araka ny fomba fanao antsoina "Haypu", ny zazalahy sy zazavavy iray izay tsy mahazaka ny fanambadiana, dia afaka, mifanaiky ny fifanarahan'ny ray aman-dreniny, hihaona amin'ny toerana izay itondran-dralehilahy an-trano ny vehivavy ho vadiny. Mirindra ny fiainana fanambadiana amin'ny H'MONG. Ny fisaraham-panambadiana dia tahan'ny.
TFetibe Taona Vaovao telo andro ny H'MONG dia voalamina isaky ny Desambra. Tsy mihinana legioma izy ireo mandritra izany. Ny zavamaneno dia misy karazana fantsom-panafody sy savaivony. Hankafy ny lohataona sy aorian'ny andro fiasana. ny zatovolahy sy vehivavy dia milalao fantsom-boaloboka sy «lip-zither» matetika hanambarana ny fihetsem-pony ary miantso ny mpiara-miasa aminy.
Tanànan'i H'MONG any amin'ny faritanin'i Thanh Hoa (Loharano: Mpanonta VNA)
◊ Ny vondrona CO HO an'ny vondrona foko enina 54 any Vietnam.
◊ Ny vondrona CONG an'ny antokon'olona 54 any Vietnam.
◊ Ny vondron'olona Vondron'olona 54 manana foko foko any Vietnam.
◊ Vondron'olona Vondron'olona Faha-54 ao Vietnam.
◊ Ny vondrona CHAM an'ny vondron-foko 54 any Vietnam.
◊ Fikambanan'olona Dokotera 54 ao Vietnam.
◊ Ny vondron'olona Vondrona ara-poko 54 ao Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi BA NA trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi BO Y trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi BRAU trong Kong dong 54 Dan toc anh em o Vietnam Nam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi BRU-VAN KIEU trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi CHO RO trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi CHAM trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi CHU RU trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi CHUT trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi CONG trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi DAO trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi GIAY trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi GIA RAI trong Kong dong 54 Dan toc anh em o Viet Nam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi HOA trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi KHANG trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
Version Dikan-teny vietnamiana (ny vi-VersiGoo) miaraka amin'ny Web-Voice (Web-Audio): Nguoi KHMER trong Kong dong 54 Dan toc anh em Vietnam.
(Visited 2,539 fotoana, 3 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny vondrom-piarahamonina PU PEO misy vondrom-poko 54 ao Vietnam
Ny vondrom-piarahamonina HRE misy vondrona foko 54 any Vietnam →
Ny fialantsasatra isan-karazany WET RICE FARMER - Fizarana 1
Comments Off amin'ny Fety sy Fety isan-karazany an'ny WET RICE FARMER - Fizarana 1
Ny Vondron'olona XINH MUN misy foko etnik 54 any Vietnam
Comments Off ao amin'ny Vondron'olona XINH MUN misy foko etnik 54 any Vietnam
Ny vondrona CO HO an'ny vondrona foko enina 54 any Vietnam
Comments Off ao amin'ny vondron'orinasa CO HO misy vondrona foko 54 tany Vietnam
Ohatra vitsivitsy amin'ny script NÔM
Comments Off amin'ny ohatra vitsivitsy amin'ny script NÔM
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,949)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,765)
Ny vondron'olona Vondron'olona 54 manana foko foko any Vietnam (5,422)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,346)
FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 2 (4,564)
Miaramila sy basy (3,266)
Comments Off amin'ny fampiharana ny ARETIKA MAMONJY ARETNAMESE, endrika endrika FIVORIANA FAMPIASANA
Ny fomba fanaon'ny RECELEBRATING TẾT
Comments Off amin'ny fomba fanao RECELEBRATING TẾT
Ny kolontsain'ny andriamanitry ny lakozia - Fizarana 1
Comments Off amin'ny The Cult of The Divities of the Kitchen - Fizarana 1
Ny fiaraha-monina LA CHI ahitana vondrona foko enina 54 any Vietnam
Comments Off ao amin'ny vondron-tariby LA CHI izay vondrona antokon'olona 54 tany Vietnam
Vondron'olona Vondron'olona Faha-54 ao Vietnam
Comments Off ao amin'ny vondrona CHU RU Vondron'olona Ethnaly 54 any Vietnam
Fitsidihana anio: 322
Fitsidihana omaly: 235
Andro farany 7 nitsidika: 2,141
Total visits: 420,195